Ogaden News Agency (ONA) – Saldhigyada Cadawga oo Weeraro Qorshaysan Lagu Qaaday – Xarunta Dhexe ee JWXO
Saldhigyada Cadawga oo Weeraro Qorshaysan Lagu Qaaday – Xarunta Dhexe ee JWXO
Posted by ONA Admin	/ December 27, 2014
Dagaala waaweyn oo qorshe sare loo dajiyay ayaa lagu qaaday saldhigyada cadawga uu ku leeyahay meela kala duwan oo dalka ka mid ah. Dagaaladaa oo aan weli la helin faahfaahin dhamaystiran ayaa waxay u dheceen sidan;
22/12/14 Baaliga oo dagmada Galaalshe ee Gobolka noqob katirsan waxaa weerar balaadhan ku ekeeyay cutubyo katirsan CWXO ee aagaas kahowl gala waxayna cagta mariyeen dhamaan wixii saldhiga ay ku lahaayeen halkaa iyagoo ciidankii cadawga kadhigay mid dhagta dhiiga loodaray iyo dhaawacmay iyo mid kaba la’aan goobta gabaxsaday. Sidoo kale N/hurayaasha Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenia ayaa soo furtay maxaabiis farabadan oo halkaas ku dhibaataysnaa waxayna ka sii qaateen hub iyo saanad kale. Faahfaahinta dagaalkan ayaa wali ah.
22/12/14 Wartaqoobaa oo dagmada Gunagado ee Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
24/12/14 Duleedka Dagmada Qabridahare dagaal aad uculus oo CWXO iyo kuwa gumaysiga Ethiopia ku dhexmaray waxaa loogu xoog sheegtay ciidankii cadawga oo laga laayay askar aad u badan oo ay saraakiil sarsare ku jiraan waxaana dagaalkaas laga dareemay guud ahaan Gobolka Qoraxay iyo qaybo kamid ah dhulka Ogadenia iyadoo lamaqlayay oohinta iyo nayid jabka ay dagaalkaas ka qaadeen waxaana lagu daba jiraa faahfaahinta rasmiga ah ee dagaalkaas.
24/12/14 Xaraar oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.